Ukuzola kwe-CBD Tincture | Eyona nto ingcono ngo-2022 yeentlungu
Iincasa, iSitrobheli, iNdalo, iCinnamon, iLemon Lime, iTangerine
Ubungakanani: 500MG | $24.99 , 1000MG $39.99 , 2500 $69.99
Cofa apha Ukuodola kwindawo yethu yeqabane i-Redemperorcbd.com
I-CBD tincture ineenzuzo ezininzi. Isixhobo sisetyenziselwa iinjongo zonyango ukususela kumaxesha amandulo. Ithathwe kwizityalo ze-cannabis, eziqulethe amakhulu eekhemikhali zeekhemikhali okanye i-cannabinoids. I-THC yeyona cannabinoid eyaziwa kakhulu. Ivelisa iimvakalelo zovuyo. I-Cannabidiol yenye i-cannabinoid engasetyenziselwa ukuvelisa iziphumo ze-euphoric. Nangona kunjalo, ayikho i-psychoactive kwaye ine-anti-inflammatory, antiseizure kunye ne-analgesic properties.
Ioyile ye-CBD ezolileyo inokuthwalwa epokothweni okanye esipajini kwaye idume kakhulu ngencasa yayo yendalo. Awuyi kungena engxakini kunye ne-FDA kuba ayinagluten. Iibhotile zedropper zenza kube lula ukuyisebenzisa. Izithako kwi-tincture ye-CBD yorhwebo zikhuselekile. Zenziwe ngeoyile ye-hemp ephilayo kwaye aziqulathanga naziphi na izitshabalalisi.
Kukho neetinctures ze-CBD ezinencasa ezikhoyo, ezifana nezo zithengiswa yiCuraleaf. Unokukhetha kwiincasa ezintathu: i-vanilla, i-ginger-cinnamon kunye ne-lavender-orenji. Ungayixuba i-tincture kunye naso nasiphi na isiselo osithandayo okanye ukutya ukuba awukho umlandeli wencasa yayo. Uya kufumana okuninzi kuyo kwaye ube nomzamo omncinci. Ungasixuba naso nasiphi na isiselo osifunayo okanye okunye ukutya okufunayo.
Kufuneka udibane nosokhemesti kunye nogqirha wakho ngaphambi kokuba uqale ukuthatha i-Cioli BD . Kuya kufuneka ulumke njengoko ingezizo zonke ii-tinctures ze-CBD ezivunyiweyo yi-FDA. Ngaphambi kokuba uqalise, luluvo oluhle ukudibana nogqirha wakho. Ukuvavanya ukuba oku kulungile kuwe, unokuthatha amathontsi ambalwa rhoqo kwiiyure ezimbini okanye kanye ngosuku. Unokuphepha imiphumo emibi kwaye ube nempilo engcono kunye ne-tincture efanelekileyo.
Ioyile ye-CBD, edla ngokuba yi-60-70 yepesenti yotywala, yincindi yemifuno egxininisiweyo. Nangona eyona njongo yayo ikukuphelisa intlungu kunye nokuxhalaba, ingasetyenziselwa ukunyanga iintlungu ezidibeneyo kunye nokunciphisa uxinzelelo. Le yincindi egxininisiweyo ye-herbal efakwe kulwelo ukukhulula zonke iimpawu zayo zonyango. I-tincture inokugalelwa kwibhotile yeglasi kwaye ihlanjululwe ngamanzi. Kulula kakhulu ukusebenzisa i-CBD.
I-CBD tincture ine-concentration ephezulu, eyenza isebenze kakhulu ukunyanga iimeko ezinzima. Kulula ukuyisebenzisa kwaye ayinayo imiphumo emibi. Ngeziphumo ezilungileyo, kuyacetyiswa ukuba utye ii-ounces ezimbini ze-CBD ngosuku. Kubalulekile ukukhumbula ukuba ioli ye-CBD akufuneki isetyenziswe phambi kokutya. Ngenxa yokuba inokucothisa ukugaya, akufuneki ibe neswekile.
Ezona zizathu zilungileyo zokuodola i-cbd tincture kwi-trytranquil.net
I-CBD tincture yincindi yolwelo yesityalo se-cannabis. Inika isiqabu kwizigulo ezininzi kwaye inefuthe elikhethekileyo. Kwakhona kuye kwaboniswa ukunciphisa uxinzelelo kunye neentlungu ezidibeneyo. Ungafumana lula Ioyile ye-CBD yeentlungu kwivenkile yokutya yezempilo yengingqi yakho. Uninzi lwe-tinctures lusekelwe etywaleni. Ezi tinctures zinokuqulatha ukuya kuthi ga kwi-60% yotywala obunokuba yingozi emzimbeni wakho. Ezi kufuneka zilungiswe nge-glycerin yemifuno.
I-tincture ye-CBD inokuthatyathwa ngesihloko okanye i-sublingual ngenye yeendlela ezimbini. I-CBD tincture ingathathwa ngomlomo. I-CBD tincture ingasetyenziselwa ukuthomalalisa iimpawu ezifana ne-tendonitis kunye nesifo samathambo. Kwakhona kunokunciphisa ubuhlungu bemisipha. Ngaphambi kokusebenzisa i-CBD tinctures, kubalulekile ukufunda kwaye ulandele yonke imiyalelo. Ezi tinctures akufanele zithathwe endaweni yamayeza amiselweyo. Nangona kunjalo, i-tinctures inokukhuseleka kwaye ibe luncedo.
Kukho iindidi ezimbini: ii-tinctures ze-CBD ezingeyo-alcohol-based kunye ne-alcohol-based CBD tinctures. Eyokuqala ixhaphake kakhulu kubomi bemihla ngemihla, ngelixa izigulane ezinexhala zivame ukukhetha ezokugqibela. Lukhetho olukhulu kwabo banexhala okanye ukuphazamiseka kokulala. Isenokusetyenziswa kwakhona ukuthomalalisa ukungagayeki kunye neminye imiba yesisu. Kwabo banengxaki yokuphuthelwa, i-CBD tincture inokuba lukhetho olukhulu. Imveliso ineenzuzo ezininzi.
I-oyile ye-CBD tincture yeyona nto ingcono. Ezi tinctures zisebenza ngakumbi kuneepilisi ze-CBD eziqhelekileyo kuba zinezinga eliphezulu lokufunxa iioyile. Abantu bakwafumanisa ukuba inguqulelo esekwe etywaleni iluncedo ngakumbi. Iyakwazi ukunceda abantu abanexhala kunye neentlungu kunye nokuphucula ukulala kunye noxinzelelo lwegazi oluphantsi. Uphando olongezelelekileyo luyimfuneko ukumisela idosi efanelekileyo kwabo babandezeleka kwezi meko.